About – Manokranti Centre
के हो मनोक्रान्ति
मन र क्रान्ति जोडिएर मनोक्रान्ति शब्द बनेको छ । जीवनका सबै समस्याको मूल श्रोत मन नै हो भने जगतका जम्मै समस्या पनि अन्ततः मनमैं ठोकिन आउँछन् ।
वि.सं. २०१८ साल असार २ गते काठमाडौंस्थित ठँहिटीको गणेश–मन्दिरमा सालनालसहित भेट्टाइएका शिशु नै आजका विकाशानन्द हुनुहुन्छ । बाल्यकालमा बदमास बच्चाको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउनु भएका विकाशानन्द त्यसपछिको समयमा चित्रकारको रूपमा परिचित बन्नुभयो । उहाँले चिकारकै रूपमा सन् १९७९ मा तात्कालिन सोभियत संघको भ्रमण गर्नुभयो । सन् १९८१ मा सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय बनारसबाट षट्दर्शनमा डिप्लोमा गर्नुभयो । त्यसपछि सन् १९९७ मा Indian Board of Medicines कलकत्ताबाट योग, रेकी, प्राकृतिक चिकित्सा र अकुप्रेशर विषयमा डक्टरको उपाधि पाउनुभयो ।
विकाशानन्द १८/१९ वर्षको उमेरमा कब्जियतको समस्याबाट पीडित भएर योगाभ्यासको सहारामा पुग्नुभयो । कैयौं डक्टर र औषधिबाट पनि निको नभएको कब्जियत योगाभ्यास र सन्तुलित आहारबाट नियन्त्रित भयो । सोही समयमा जनकपुर जाँदा ध्यान गर्ने क्रममा उहाँलाई सविकल्प समाधि घटित भयो । पछि सन् १९९५ मा भारतको बैंगलोरस्थित NIMHAMS मा डा. मैत्रीको रोहबरमा गरिएको कुण्डलिनी वैज्ञानिक परिक्षणको क्रममा उहाँको मस्तिष्कका चारैखण्डमा अल्फा, बेटा, थेटा र डेल्टा तरंग एकैसाथ देखिएको तथ्याङ्कित गरिएको थियो । यो परीक्षणले जनकपुरको घटनालाई वैज्ञानिकरूपमै पुष्टि गरेको मान्न सकिन्छ । यस घटनाको एक महिनापछि उहाँलाई पूर्वाभास अर्थात् पछि हुने घटना पहिल्यै थाहा हुन थाल्यो जुन तेस्रो नेत्रको क्रियाशीलता मानिन्छ । यस सँगसँगै विकाशानन्दमा आमूल परिवर्तन भयो र उहाँ चित्रकारबाट योगीमा रूपान्तरित हुनुभयो ।
विकाशानन्द सन् १९९७ मा प्रवचन दिन र योग सिकाउन अमेरिकाको कोलोराडो पुग्नुभयो । उहाँले भारत, ब्राजिल, रसिया, कोरिया, कतार, बेलारुस, यू.के. आदि देशमा पनि प्रशिक्षण दिँदै आउनुभएको छ ।
विकाशानन्दको योगदानलाई कदर गरी २३ डिसेम्बर २००६ मा Interreligiour and International Federation for World Peace ले शान्ति दूत (Ambassador for Peace) उपाधिबाट विभूषित गरेको छ। त्यस्तै मनोक्रान्ति अभियान मार्फत राष्ट्रलाई पुर्याउदै आउनुभएको योगदानको कदर गरी मिति २०७४ फाल्गुण २६ गते लायन्स क्लबले विकाशानन्दलाई पोखरामा एक भव्य समारोहबीच नागरिक अभिनन्दन गरेको छ ।
मन र क्रान्ति जोडिएर मनोक्रान्ति शब्द बनेको छ । जीवनका सबै समस्याको मूल श्रोत मन नै हो भने जगतका जम्मै समस्या पनि अन्ततः मनमैं ठोकिन आउँछन् । त्यसैले आफ्नो मनलाई राम्ररी बुझ्नु नै सबै खाले समस्याको समाधान हो ।
कसरी मनलाई बुझ्ने त ?
मनको पनि श्रोत हो चेतना वा आत्मा । अतः चेतनामा टेकी मनलाई नियाल्न सकियो भने मनले दुःख वा समस्या निर्माण गर्नै सक्दैन । उदाहरण – सानो बच्चा बजारको भीडमा सजिलै हराउँछ र यसले आमा–बाबाको मनमा भयंकर दुःख–कष्ट निम्त्याउँछ । तर भीडमा छिरेको त्यो बच्चालाई बाबु–आमाले नियालिरहन सक्यो भने भीड जति ठूलो भएपनि हराउने सम्भावना रहँदैन । र, बच्चाबाट आउने त्यो दुःख–कष्ट टरिनेछ ।
क्रान्ति शब्दको अर्थ हो सम्पूर्ण परिवर्तन । राजनीतिक शब्दमा– पुरानो राज्य सत्तालाई निमित्यान्न पारी नयाँ सत्ता कायम गर्नु क्रान्ति हो । यसरी मनोक्रान्तिको अर्थ हुन आउँछ– मनको पुरानो शासनबाट आफूलाई स्वतन्त्र पारी चेतनाको, बोधको आधारमा बन्धन मुक्त जीवनको सुरुवात गर्नु । स्मरण रहोस्– चेतनालाई कहिल्यै दुःख हुँदैन सदा आनन्द हुन्छ, चेतना कहिल्यै कमजोर हुँदैन, सदा शक्तिशाली हुन्छ । चेतनालाई जीवनबारे सिकाइरहनु पर्दैन किनकि त्यो आफैं ज्ञान युक्त छ, त्यसैले यसलाई कतै आत्मा, कतै ब्रम्ह, कतै ईश्वर पनि भनिएका छन् । र, यही चेतना बोधको एक मात्र बाटो हो मनको क्रान्ति अर्थात् मनको बन्धनबाट पूर्णयता मुक्ति । यही मनोक्रान्ति–दर्शनलाई जनमनमा पुर्याउने उद्देश्य सहित २०४५ सालदेखि नै यस अभियान को विजारोपण भएको हो । मनोक्रान्ति गर्ने साधनको रूपमा यसले योग, ध्यान, मोटिभेसन, रेकी, जीवन–दर्शन एवं प्राकृतिक जीवनशैली अगाडि सार्दै आइरहेको छ । (यस अभियानले २०६३ सालमा ललितपुरस्थित गोदावरीमा पञ्चवर्षीय आवासीय सत्र चलाइएको थियो जसमा झण्डै १५० युवा–युवतीले मनोक्रान्ति–दर्शन एवं साधनलाई सिकेर पचहत्तरै जिल्ला र भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ्गसम्म फैलाउन सफल भएका थिए । हाल मनोक्रान्ति यू.के.मा समेत विस्तार भैसकेको छ । त्यस्तै देशभरी १५ वटा जति शाखा–उपशाखाले मनोक्रान्ति कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । मनोक्रान्तिलाई विश्वव्यापी बनाउने उद्देश्य सहित
यो अभियान जारी छ । र, यस महायात्रामा तपाईंको साथ र सुझाव हामीलाई खाँचो छ ।)
मनोक्रान्ति चिन्हको अर्थ
यस मनोक्रान्ति चिन्हमाथि गौर गर्नुहोस् । यसका तीन भाग छन् । घुमेको, सीधा र थोप्लो भाग । घुमेको भागले मान्छे जन्मदै सामाजिक जन्जालरूपी चक्रव्यूहमा फसेको संकेत गर्छ । सीधा भागले आफ्नो सफलताको/मुक्तिको सीधा बाटो खोज्न सकिन्छ भन्ने जनाउँछ । र, थोप्लोले वास्तविक रूपमा सफल हुने/स्वतन्त्र हुने कुरोको संकेत गर्दछ ।